Njem Nleta n'Africa - Azụmahịa Onye Ọ Bụla
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Njem Nleta n'Africa - Azụmahịa Onye Ọ Bụla
Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na DR Congo • Education • investments • ndị mmadụ • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Njem Nleta n'Africa bụ azụmahịa onye ọ bụla kwuru Dr. Yvonne Iyamulemye Kabano nke Congo na nri abalị na Kinshasa kwadoro maka mmemme nke mịnịsta njem nlegharị anya nke Congo bụ Elvis Mutiri wa Bashara nke akwụkwọ njem ya na ohere itinye ego na Congo (DRC) na na ime nke a n'Africa.
Dr. Yvonne Iyamulemye Kabano bụ onye dibia bekee nke kwenyere na njem nlere anya ya nile ma choo ihu Congo (DRC) imeputa isi ahia ya puru iche, kamakwa ndi njem nleta.
Ọ nọ n’azụ ihe osise nke Project Round 10 Malaria Global Fund maka mmejuputa saịtị nlekọta obodo na mpaghara ahụike nke Kabare na Bagira / South Kivu yana zụọ ndị na-elekọta ahụike ma lekọta ọrụ ha na mpaghara ahụike. Dr. Yvonne Iyamulemye Kabano nọkwa na-azụ ọzụzụ na nlekọta nke ndị ọrụ nke ngwanrọ onyunyo nke Hagenia (ịkọ akụkọ banyere mmetụta ọjọọ nke antimalarials) site na teknụzụ ọhụrụ na mpaghara ahụike nke Karisimbi na Masisi na North Kivu. Na 2002/03 ọ bụkwa onye ndụmọdụ nke atù Na-abụghị Ọchịchị na-alụ ọgụ megide HIV AIDS. Ọnọdụ ahụike ka mma maka Congo (DRC) maka ọdịnihu dị mma bụ ọhụụ nke Dr. Yvonne Iyamulemye Kabano.
Nwaanyị nwere ọtụtụ onyinye kemgbe ọ bụ onye bụ osote Mịnịsta na 2007 na Congo (DRC) Ministry of Defense.
Dr. Yvonne Iyamulemye Kabano nwere mmasi na mmepe nke njem nlegharị anya maka Congo (DRC) na igosipụta akụ ya niile na olile anya ịhụ ka ụmụ nwanyị na-esonye na njem ndị njem na Congo (DRC).